Welcome to Aayaha Nolosha » Calaamadaha Gabadha wax jecel
Calaamadaha Gabadha wax jecel
February 7, 2018 - Waxaa Qorey : Caaqil Dalmar -
Gabdhuhu way kala duwan yihiin dabeecad ahaan, taasina waxay keeni kartaa in ay ku kala duwanaadaan calaamadaha ay u muujiyaan marka ay wax jeclaadaan, balse waxaa jira calaamado ay ka siman yihiin, waxaana Calaamadaha ugu caansan ka mid ah:-
1: Xishood: Waa calaamadda ugu horraysa oo lagu garto gabadha wax jecel, waxa ayna ugu horreyn la soo baxaysaa xishood xad-dhaaf ah oo mararka qaarkood ku kalifa in ay ku tusi kari waydo wajigeeda oo ay fooror kugu qaabisho
2: Naxdin: Waxaa gabadha wax jeceli ku badanaya naxdinta dhinaca wadnaha la xiriira oo mar kasta oo ay la kulanto qofka ay jeclayd, waxa garaac xoogan sameeya wadnaheeda, laakiin ogow garaacaasi ma aha xanuun ee waa jacayl karaaray, isku dhex-yaacid iyo aamusnaanina ay weheliso.
3: Hadaaq: Waxa gabadha wax jeceli ku bata in ay mar kasta ku halmaanto carabkeeda magaca qofka ay jeceshahay, waxaana dhacda in iyada oo qof kale u yeeraysa ay ku hadaaqdo magaca qofka ay xooga u jeceshahay, isla muddo yar kadib waa ay ka noqonaysaa iyada oo iska dhigaysa in ay khaldantay, balse uu jiitay wixii qalbigeeda ku jiray.
4: Ka sheekeyn: Waxa aad arkaysaa iyada oo mararka qaarkood ka sheekaynaysa ninka ay jeceshahay marka ay la joogto saaxiibadeeda dhabta ah ee aanay waxba kala qarsan, ugana sheekaynaysa in ay si wayn u jeceshahay ninkaas isaga ah, balse waxa ay ka faaloonaysaa dhaqamada fiican ee uu leeyahay qofka ay jeceshahay, marnaba ma soo hadal qaadayso xume haddiiba uu leeyahay.
5: Shaki: Waxa ay la soo baxaysaa shaki ay ka qabto in laga dul qaado jacaylkeeda, xitaa haddii ay aamisan tahay in uu daacad u yahay, mar kasta oo ay arki weyso waxa ay u qaadataa in uu ku maqan yahay gabar kale, taasi oo sabab u ah shaki aan la soo koobi karin, waxaana la yiraahdaa shakigaasi waa kan dhaliya maseyrka dumarka.
6: Eegmo: Waxa ay mar kasta jeceshahay in ay daawato qofka ay u bugtay iyadoo si xatooyo ah u eegeysa, kamana dhargayso in ay daawato maantoo dhan. waayo waxa u ooman meel ololeysa oo dawo ay uga dhigeyso aragtidiisa. Mana doonayso in uu arko qofkan ay eegmada ku badinayso, marka uu soo eego deg-deg ayey uga jeedsanaysaa, laakiin waxa ay rabtaa in ay eegto isaga oo aan soo eegayn, noocan eegmada ahi waa ay ka duwan tahay eegmooyinka waayo waa indho-ku doogsi iyo farxad.
7: Maqnaan xaga maskaxda ah: Waa ay maahsan tahay inta badan, inkastoo aysan ahayn calaamad sidaasi u wayn, haddana mararka qaar waxa ay ku keentaa saamayn xoogan. Waxaana ku yimaada maqnaansho dhinaca maskaxda ah, oo marka ay hawl qabanayso soo dhexgala, marmar waxaa lagu arkaa gabadha marka ay dad la joogto iyadoo maskax ahaan baxda oo ka fikiraysa qofkii soo galay maskaxdeeda, haddii uu qof su’aalo wax la su’aalo waxay ku soo himbaabirtaa ereyga “Yaah !” marka la weydiiyo halka ay ku maqan tahay iyo wixii ay ka fikiraysay, waabay dafirtaa in ay fikiraysay. Waxyaabaha maankeeda ka guuxayana waxa ugu culus sida ay ula kulmi lahayd qofka ay u hayso jacaylkan daran.
8: Socod ku-badin: Waxa ay goor kasta raadisaa in ay indhaha ku dhufato qofka u daran in ay aragto, taasina waxa ay keentaa in ay bilowdo socod badan oo ay ku tagayso goobaha laga helo qofka ay rabto in ay indha ku doogsato.
9: Xarago xad-dhaafa: Waxay goor kasta iska dhistaa dhinaca labiska iyo kala badalka dharka. tani waa calaamad muujinaysa soo jiidasho qofka ay jeceshahay, waxa ay ka baqaysaa in lagu naco lebis xumada iyo xarago la’aanta. ugu yaraan ilaa saddex sad oo kala duwan ayay xirataa marka ay doonayso in ay soo hormarto goobaha laga helo qofka ay jeceshahay.
10: Telefoon ku-hadal badan: Waxay aad ugu dadaalaysaa in ay xiriir fiican la yeelato qofka ay jeceshahay haddii ay ku adkaato in ay toos ula xiriirto jacaylkeeda, waxa ay la xiriiraysaa cidda ay isku fiican yihiin jacaylkeeda, iyada oo ka urinaysa jacaylkeedii. mar kastana waxa lagu arkaa iyadoo telefoon garaacaysa ama ku mashquulsan in ay isaga la hadasho amaba fariimo u diraysa.
11: Wax kasta haye: Mar kasta oo uu wax waydiiyo qofka ay jeceshahay waxa ay ugu jawaabtaa haye, xitaa haddii aanay waxaasi karayn, arrintani waa culayska ugu weyn ee uu leeyahay jacaylku, marnaba ma dhihi karto waxaasi ma awoodi karo, tanina waxa ay keentaa mararka qaar in xadgudub ay ku dhacdo amaba lagu sameeyo.
12: Xanaaq la’aan: Qofka ay jeceshahay wax kasta oo uu ku yiraahdo uma aragto wax dhibaato ah, xitaa hadduu caayo, u geysto hanjabaad iwm, oo wax kasta oo uu ku yiraahdo kama xanaaqayso waayo waxaa jiidanaya jacayl aan la soo koobi karayn, waxa ay ku dadaalaysaa in ay yeesho wax kasta oo raali galinaya qofkan ay aadka u jeceshahay, sidoo kale qodobkani xadgudub inay ku dhacdo wuu fududeyn karaa, haddaysanba wax ka diidi karin amaba aysan ka xanaaqeynin.
W/Q:- Cali Cabdi Coomay